Zuva: 2 October 2019
Kocaeli Protocol paPedestrian Safety Watch
2019 yakaziviswa 'Year of Pedestrian Prepic Traffic' neBazi reMukati. Panguva iyo migodhi yemigwagwa kune avo vasingapi pamberi pevanofamba netsoka inowedzerwa ne100, Kocaeli Governance, Kocaeli Provincial Security Directorate, Kocaeli Provincial Gendarmerie Command uye Kocaeli Metropolitan Municipality. [More ...]
Nhau dzakanaka dzeiyo ski resort yeIzmir
Gurukota rezvekurima nemasango Bekir Pakdemirli, Bozdag Ski Center akaongorora. Pakdemirli. Odemis ndeimwe yeakakosha ski Resorts muAegean Dunhu rekushanya kwechando. [More ...]
Robot Investment neindasitiri 4.0 Zvikumbiro zveSummit zvatanga. 3 ichaenderera kusvika manheru eChina Gumiguru. Investment muunyowani nyowani haidi nguva zhinji inoda bhajeti uye nguva dzekutendeuka. pachako [More ...]
International Military Radar uye Border Security Summit - MRBS yakavhurwa nekutora chikamu kweGurukota rezvemukati menyika Süleyman Soylu negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Hulusi Akar. Pakavhurwa Musangano, chibvumirano chekudyidzana mushandirapamwe mukati merudzi rwezvinhu zvehumanje uye zviitiko zvebazi rehurumende reDziviriro weNyika. [More ...]
Karşıyaka Iyo Yekupedzisira Mamiriro ezvinhu mu Çiğli Tram Project
Yakatangwa muna Kubvumbi Karşıyaka Iyo purojekiti, iyo yakange yakagadzirirwa kuwedzera tram kune Çiğli kutungamira, yakave yakabvumidzwa ne İzmir Governorship uye EIA maitiro yakatangwa. Izmir Metropolitan Municipality, pane chikumbiro kubva kuvagari kuti vawedzere kutungamira kwetram yakaturika mhata. chirongwa [More ...]
Nhumwa kubva kuHutungamiri hweDziviriro Dziviriro, Karabük Iron uye Steel Enterprise (KARDEMIR) AS. KARDEMİR AŞ yakatora nhume kubva kuDziviriro Rekuchengetedza Hutungamiriri. KARDEMİR kugadzirwa uye kuita mari kweiyo yekudzivirira indasitiri nhasi [More ...]
Haydarpaşa Solidarity: 'Haydarpaşa naSirkeci Chitima Chiteshi Yekuendesa kuIMM'
Haydarpaşa Solidarity Haydarpaşa uye Sirkeci Chitima Chiteshi chekutamisa Istanbul Metropolitan Municipality vakaita chinyorwa chakanyorwa. Description; “Tinokumbira kuendeswa kweHaydarpaşa naSirkeci Station kuenda kuIstanbul Metropolitan Municipality pamamiriro ekuti ivo vanoshandiswa nekuda kwavo kwekutanga uye kune veruzhinji! Haydarpasa [More ...]
Esenboğa Airport Subway 1 Inodhura Bhirionari Madhora
Esenboğa Airport Subway 1 Inodhura Bhirionari Madhora: Meya weManara Metropolitan Municipality Mansur Yavaş akatora chikamu muAlt One pane Imwechete ”chirongwa cheFatih Altaylı paHabertürk TV. Ichitsanangura zviitiko zvezuva nezuva zve200 panhepfenyuro yehupenyu, Meya Yavaş akaisawo mapurojekiti ake eBaşkent. [More ...]
Manisa Kadhi Kukumbira Yakawedzerwa
MANULAŞ, anotsigira Manisa Metropolitan Municipality, akazivisa kuti iyo Manisakart application yakagadziridzwa muApple Store. Manisa Card application, iyo inoita kuti vagari vakwanise kuwana ruzivo rwavanoda pamusoro pemitsetse yemabhazi mukati memiganhu yeManisa Metropolitan Municipality pane App Store. [More ...]
Kufambisa Kweruzhinji neElkart Identity Makadhi 3 Zuva Mahara
Konya Metropolitan Municipality inopa vadzidzi mukana wekushandisa yavo ID yevadzidzi makadhi seElkart mukufambisa kwevanhu uye kubatsirwa nemotokari dzekufambisa dzeruzhinji rwe3 mahara kubva pakatanga kushandiswa. Konya Metropolitan Municipality; Selçuk Yunivhesiti, Necmettin [More ...]
Salim Dervişoğlu kuvaka yechipiri nhare chiteshi
Mafoni emagetsi ari kuvakwa paSalim Dervişoğlu Street, iri imwe nzira kuD-100 nzira huru, iyo inoshandiswa nekufambisa neveruzhinji kuenda kumatunhu Kocaeli's Karamürsel, Gölcük neBaşiskele. Yekutanga yakavakirwa kuimba yeruzhinji kumira [More ...]
TransportationPark 12 Kutakura Kwekufambisa Kunaka kubva kuDunhu kuenda kuKocaeli University
zvikepe Turkey wokupedzisira pamwe chokufambisa Kocaeli Metropolitan Municipality ulaşımpark subsidiaries ayo, zvachose 12 akasiyana mumaruwa Kocaeli University (Cod) 'Chii chinoita senga basa. Metropolitan Municipality inopa zvekufambisa basa muKocaeli ne336 zvakanakira bhazi. Metropolitan, 2019-2020 mumwaka wekudzidza [More ...]
Kuparadza kwenzvimbo dzinoshandiswa munzvimbo dzepasi peElsler Bus Station, iyo yakatorwa neIMM, yakapera. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), 9 yakatora munaSeptember 15 July Democracy bus Station (Esenler) iri kuchenesa nzvimbo dzakasiiwa, dzakanetseka. Icho chinangwa chemazasi epasi pechiteshi chebhazi [More ...]
IMM Yakakumbirwa Metrobus uye Inozivisa Solution
Istanbul Metropolitan Municipality yakaita kukumbira ruregerero nekuda kwekunyanyisa kweiyo Altunizade metrobus kumira mangwanani. Kuti avandudze mamiriro ezvinhu, Söğütlüçeşme akataura izvozvo kune ese metro [More ...]
IETT kutsigira ITU's Driverless Vehicle Project
IETT General Directorate inotsigira iyo isina kutyaira mota chirongwa icho Istanbul Technical University inoronga kukudziridza pamwe nevatambi vepasi rose. IETT General Directorate, mumwe wemakabatana eIstanbul Metropolitan Municipality (IMM), inzvimbo inotapira, neimwe nzira sosi inoita kuti hupenyu hwemadhorobha huve nyore. [More ...]
Kudzidziswa kweVadzidzi paKutenderera muCrafic
Kahramanmaraş metropolitan Municipality yakapa kudzidzisa bhasikoro kune vadzidzi vari muErkenez nharaunda kuitira kukurudzira kushandiswa kwemabhasikoro mukufambisa kwemadhorobha. Vana vakafamba munzira kuenda kuchikoro nevadzidzisi vavo. 23-27 Nyamavhuvhu mukati meganho remushandirapamwe we 'Ngatiendei Kuchikoro neVana' chirongwa chakatangwa ne Healthy Cities Association [More ...]
Bozöyük Akayedza Akapomerwa Kupomerwa Nyaya Yezvekuitisa Nyaya Yengozi
Muna 2009 Bozoyuk vakaregeredza ari muchitima aparara yakaparara vanhu vashanu uye basa ravo nokutaura kuti Republic of Turkey State Railways (TCDD) akanga sued pashure vashandi vaviri simba 10 makore. Mune iri kuramba ichienderera nyaya pamberi peBozzyük Assize Dare, iyo TCDD [More ...]
Kuisirwa kweHanlı-Çetinkaya Electrization Plants Landslide Kuvandudza Basa Pakati peDurak Bucak Nzvimbo Dzakafanana Nenzira Railway Nhau uye Dzimwe Nhau Unogona Kuve UnofariraRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Iko hakuna zvinyorwa nyoro zve25.01.2019 pane yedu system.RayHaber 04.02.2019 [More ...]
Nhamba yeA Ankarakart inoshandiswa mune dzese mota dzekufambisa mune guta rakapfuura 6 mamirioni. Mune 2020-2024 Strategic Plan kabhuku kaEGO General Directorate, nhamba yeA Ankarakart maererano nemhando yavo yakaiswawo. Maererano nedatha kubva kuEGO, 30 munaJune yakazara 6 mamirioni muA Ankara [More ...]
Gavhuna wedunhu Sırmalı Kuongorora paEdremit Çanakkale Highway
Edremit Çanakkale D550-06 Kuti udzivise magwekwe kuitika mumugwagwa, musangano wakaitwa pasi pehutongi hwaEdremit Gavhuna wedunhu Ali Sırmalı uye kuongororwa kwemugwagwa kwakaitwa munzira. Kuti uone kuti traffic inoyerera mudunhu medu yakagadzikana uye yakachengeteka, Edremit Dunhu Gavhuna Ali [More ...]